Beecinta kursiga RW oo bilaabatay! "Musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago “sooryo” ay siiyeen Mursal & Muudeey - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaBeecinta kursiga RW oo bilaabatay! “Musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago “sooryo”...
Ra’iisal Wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi oo xalay kulan gaar ah la qaatay Gudoomiye ku Xigeenka Koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Muudeey ayaa markii uu kulankaas soo dhaamaday waxa uu kulan gaar ah gurigiisa kula qaatay, qaar mida taageeriyaashiisa oo ay ku jiraan qaar kamida agaasimayaasha wasaaradaha ee DFS.
Cali Maxamed Geedi oo ay ka muuqato kalsooni buuxda ayaa u sheegey dadkii uu la kulmay in hoowshiisii soo dhaamaatay oo waxa uu sugaa oo kaliya tahay ku dhawaaqid. Waxa uuna ku adkeystay in gudoonka Baarlamaankana (Mursal iyo Muudeey) ay isaga taageerayaan. Cali Gedi ayaa sidoo kale sheegay in uu heshiis lacageed la galay Mudeey oo wakiil ka ahaa Gudoomiye Mursal, lacagtaan oo qaybtii horumariska ahayd la bixinaayo, lacagta kalana la siin doono marka ay ka shaqeeyaan magacaabistiisa.
“.. waxaan isla garanay Muudeey in aan sii bixiyo lacago hormaris ah, ka dibna inta kale aan gadaal ka siino, .. waxaan u sheegay Gudoomiye Muudeey in aan howsha noocaan ah aan aniga horay u soo maray, qaabka loo xaliyana aan aqaano. Marka wal-wal ma ka qabi-kartaan ragaas, ee waan in aan diyaarinaa lacagtii” sidaas waxaa yiri Cali Geedi oo la hadlayay qaar ka mida taageerayaasha dhaqaalaha ku taageera.
Waxa uu ku daray “waxaan kaloo u sheegayaa Muudeey, in ayan xaq ahayn in dhaxalkii caruurtooda uu Xasan Kheyre la tago, taa oo aan ula jeeday in ceyrinta Xasan Kheyre ayan lacag ka helin, laakiin hada ay u baahan yihiin in ay lacag ka sameeyaan magaacista Ra’iisal Wasaaraha cusub… aad iyo aad ayaana isku afgaranay”
Ma aha Cali Geedi oo kaliya musharaxiinta sheeganayso in ay lacag ku bixiyeen ama ku bixin doonaan si loogu magacaabo kursiga Ra’iisal Wasaaraha. Wasiirka Ganacasiga ee dowlada Fedaraalka Eng. Cabdullahi Cali Xasan ayaa dhankkiisa sheegay in uu Gudoomiye Mursal iyo ku xigeenkiisa Muudeey uu siyay lacag uu ku sheegay “Sooryo” taas oo la sheegay in ay gaarayso $100,000 (boqol kun oo doolar).
Ma aha kaliya in Eng. Cabdullahi Cali Xasan uu siiyay lacag Gudoonka Baarlamaanka, balse waxa uu sidoo kale sheegay in uu lacag siiyay ninka lagu magacaabo Cabdulqadir Maxamed Nur oo loo yaqaano Jamac, kaas oo lataliye gaar ah u ah Gudoomiye Mursal. Cabdullahi Cali Xasan ayaa rumaysan in Jama uu saamayn wayn ku leeyahay Gudoomiye Mursal isla markaan uu ka dhaadhicin karo in ay isaga taageeraan.
Dhanka kale Cabdikarin Guuleed ayaa sidoo kale balan qaaday in uu guri labaad uga iibin doono Dalka Turkiga Labada Gudoomiyee Mursal iyo Muudeey hadii ay dar-dar galiyaan taageerida musharaxnimadiisa. Labadaan mas’uul ayaa xaasaeskooda waxa ay degan yihiin dalka Turkiga.
Sida MOL loo xaqiijiyay Cabdikarin Guleed ayaa horay dhaqaale hordhac ah ugu soo diray Mursal iyo Muudeey. Labadaan mas’uul ayaa ay ka go’an tahay in ay dhaqaale ka sameeyaan magacaabista Ra’iisal WSasaaraha cusub.
Beesha Caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa uga warhaysa talaabooyinka ay horay u qaadeen Mursal iyo Muudeey iyo lacagaha la isdhaafsaday dhowrkii asbuuc ee u danbeeysay. Su’aasha dad badan isweydiinayaan ayaa ah Madxaweyne Farmajo ma ka warhayaa beecinta Kuriga Ra’iisal Wasaaraha?
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo)- January 24, 2021
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo)- January 23, 2021
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo)- January 22, 2021